FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIOMPY CARPATHIAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mpiompy Carpathian
Aro, sary nahazoana lalana avy amin'i Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Alika mpiandry ondry Carpathian
Alika mpiandry ondry romanianina
Alika mandany be, mailaka, tsy miseho ho bika, endrika matanjaka. Ny vatana dia mahitsizoro, miaraka amina croup malalaka izay somary mirona. Malalaka sy lava volo izy io, ary manana soroka lava sy somary mirona. Ny dimorphism ara-nofo dia tsikaritra tsara fa ny lahy dia tokony ho lava sy mahery noho ny vavy. Ny Carpathian Shepherd Dog dia alika mesocephalic, manana loha matanjaka sy amboadia, fa tsy mikimpy. Mivelatra sy somary miolakolaka ny handrina. Ny karandoha dia midadasika kokoa eo anelanelan'ny sofina ary mihena tsikelikely mankany amin'ny fijanonana. Ny lava-bolan'ny medial dia ampy sy ampy marika. Ny orona dia lehibe, malalaka ary mainty foana. Mahery ny vavam-borona, miaraka amina faritra efa boribory boribory, somary miendrika kônina voapaingotra. Ny halavan'ny vava dia fohy na mitovy amin'ny karandohany. Ny molotra dia matevina, miraikitra, misy loko matevina ary voafaritra tsara. Ny maso mainty volontany dia miendrika almond. Ny rambony dia kirihitra, rakotry ny volo be dia be. Amin'ny fitsaharana dia tazonina, miendrika mahitsy na sabatra kely ny endriny, manohina ny volombava rehefa mailo ny alika na mihetsika, dia avo ny rambony Ny palitao dia masiaka, be dia be ary mahitsy. Ny akanjo ambany dia matevina sy malefaka. Afa-tsy ny loha sy ny tarehy taloha an'ny rantsam-batana izay fohy sy fisaka ny volo, be dia be ny volo manerana ny vatana, lava salantsalany. Amin'ny tendany, ny tarehy aoriana amin'ny rantsam-batana sy ny rambony, ny volo no lava kokoa noho ny volon'ireo faritra ireo satria mahazatra. Ny loko palitao dia misy fasika (amboadia), misy alokaloka isan-karazany, mazàna maivana kokoa amin'ny sisiny ary maizina kokoa amin'ny vatana ny fasika (amboadia) misy teboka fotsy, kokoa tsy miparitaka be loatra.
Teraka ho toy ny mpiambina, ny Carpathian Sheepdog dia miavaka amin'ny fanolorany tena tsy misy fepetra amin'ny andian'ondry sy ny tompony. Alika mendri-kaja, tony ary mahay mandanjalanja izy io. Raha te hitandrina tsara ny Carpatin dia tsy maintsy manao izany ny fianakaviana hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny iray manontolo miara-miasa ny fonosana ambanin'ny tsipika mpitondra tokana dia voafaritra mazava ary apetraka ny lalàna. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Haavony: Lehilahy 25 - 29 santimetatra (65 - 73 cm)
Haavony: Vehivavy 23 - 26 santimetatra (59 - 67 cm)
Na izany aza, ny fisehoana ankapobeny no zava-dehibe indrindra.
Milanja: mifanaraka amin'ny andilana, manome ny fahatsapana ny alika mahery nefa tsy mavesatra.
Ny Carpatin dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Manana palitao amin'ny toetrandro rehetra izy ary ho afa-miaina sy matory any ivelany. Ny toetrany dia mitaky fiainana an-kalamanjana.
Mila fampihetseham-batana ity karazany ity ary tokony horaisina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Ho fanampin'izay dia tokony hisy tokontany na toerana malalaka ahafahany mandositra soa aman-tsara.
Jack Russell hazo fijaliana Shih Tzu
Ny palitao dia handray soa avy amin'ny fikosehana tsindraindray.
Avy any Romania io karazana io. Alika mpiambina andian'ondry tena tsara nampiasain'ny mpiandry ondry romana nandritra ny taonjato maro izy ary mpiambina mahafinaritra. Ny alika mpiandry ondry Carpathian dia voafantina tamin'ny karazana endemika izay misy ao amin'ny Carpathians sy ny faritra Danube. Nandritra ny taonjato maro, ny antony lehibe indrindra dia ny fampiasana azy io nitazona ny endriny tsy mbola voakitika hatramin'izao. Ny fenitra voalohany dia nohazavaina avy amin'ny The National Zootechnical Institute tamin'ny 1934 ary novaina sy novaina tamin'ny 1982, 1999 ary 2001 avy amin'ny The Asociatia Chinologica Romana (Romanian Kennel Club (RKC)). Ny komisiona teknikan'ny Asociatia Chinologica Romana (RKC) dia nanamboatra ny fenitra tamin'ny 30 martsa 2002, araka ny lamina navoakan'ny The Federation Cynologique Internationale.
Pocahontas de Baltag, sary nahazoana lalana avy tamin'i Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Mura de Baltag, sary nahazoana lalana avy tamin'i Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Alika kely Carpathian Sheepdog, sary nahazoana lalana avy tamin'i Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Bongo, alika mpiandry Carpathian amin'ny 5 taona— 'Alika be fitiavana izy, tsara fitondran-tena ary miaro!'
Sary natolotr'i Andrea Popa
amerikana bulldog amerikana sy fifangaroan'ny lavaka orona
manana alika ve ny alika amin'ny hoho
staffordshire omby terrier frantsay bulldog mix
afaka miteraka alika sy coyotes
karazana jack russell terrier mifangaro
jack russell terrier rottweiler mix
sôkôla sy fotsy Cocker spaniels